မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: ငွေဆောင် ခရီးစဉ် အမှတ်တရ
မမျှော်လင့်ပဲ ငွေဆောင်ကမ်းခြေကို အလုပ်နဲ့အတူ ခရီးထွက်ခဲ့ရတာ ပျော်စရာကောင်းပြီး နဲနဲတော့ ပင်ပန်းလာပါတယ်။ မသွားခင်ကတည်းက ၀ိုင်းပြီး မှာကြားကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဆန္ဒအသီးသီးကတော့-ကမ်းခြေမှာ ဓါတ်ပုံတွေ အများကြီး ရိုက်ခဲ့တဲ့ (မမီပုံ မပါလဲရတယ်ဆိုပဲ  )-ငါးအရေခွံ ၀ယ်ခဲ့တဲ့ (ဘီယာတို့ အရက်တို့နဲ့ မြည်းရင် ကောင်းမှကောင်းဆိုပဲ) -ရွှေမြင်းပျံ ပုသိမ် ဟာလ၀ါလဲ မစားရတာကြာပြီတဲ့ -ငွေဆောင်ကို အတူပါလိုက်ချင်သတဲ့ (ချောင်းသာကိုပဲ ရောက်ဖူးလို့တဲ့) -ပင်လယ်ကိုတောင် မမြင်ဖူးသေးလို့ ဘလော့မှာတင်တာပဲ လာဖတ်ဦးမယ်တဲ့ -ဘီကီနီနဲ့ ကဲရင် ရေအောက်ထဲက web cam တွေ သတိထားတဲ့ -မုံ့ မုံ့ ၀ယ်လာခဲ့တဲ့ -လူကြီးတွေ ရှေ့မှာ လိမ်လိမ်မာမာနေတဲ့ (ရာထူးမြန်မြန်တက်အောင်) -ချောင်းသာမှာတော့ မကောင်းတာတွေ မလုပ်နဲ့ဆိုတော့ (ငွေဆောင်ဆိုတော့ လုပ်လို့ ရတယ် ထင်ပါရဲ့)အဲဒီအမှာစာတွေကို သေချာမှတ်သားပြီးတော့ 20ရက်နေ့ မနက် 6နာရီ20မှာ ကားစထွက်ပါတယ်။ပုံမှန် 5နာရီလောက်ပဲ မောင်းရမှာပေမဲ့ လူကြီးတွေပါတော့ ဖြည်းဖြည်းမောင်းသလားမသိ။ 8နာရီမှ ညောင်တုန်းရောက်လို့ မနက်စာစားတယ်။ ကင်မရာ ပါမသွားလေတော့ လမ်းမှာ ရှိတဲ့ မြင်ကွင်းမှန်သမျှ စိတ်ထဲမှာပဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ရတယ်ဗျာ (စိတ်တောင်မကောင်းဘူး)။11 နာရီလောက်မှာ ပုသိမ်ရောက်ပြီး ပုသိမ်ဟိုတယ်ကို inspection လုပ်ပါသေးတယ်။နေ့လည် 1နာရီ 15လောက်မှ ငွေဆောင်ကိုရောက်ပါတယ်။ ရောက်ရောက်ချင်း ရေထဲ မဆင်းရပဲ လှိုင်းပုတ်သံတွေ နားထောင်ပြီး စိတ်ထဲမှာ လွမ်းသလိုလို မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ဂယောက်ဂယက်ဖြစ်လို့ ဖုန်းပြောဖြစ်သေးတယ်။ (ဘယ်သူလဲလို့ မေးပါနဲ့ ) (တခြားမပြောချင်ပဲ ပြောဖြစ်တဲ့ သူတွေကတော့ အုန်းသီး(ကင်မရာ) မပါရင် အုန်းပင်ပေါ်တက်ခူးတဲ့ ။ သူများက စကတ် အတိုနဲ့ပါဆို၊ အင်မတန် စိတ်ပုတ် ရက်စက်တဲ့သူတွေပါပဲ)ငွေဆောင်က ရန်ကုန်ကနေ 40ကီလိုမီတာလောက်ပဲ ဝေးပါတယ်။ အရင်တုန်းက အဲဒီရွာနာမည်က “ငဆော ” ပါတဲ့။ နေ့လည် 3နာရီမှာ ဟိုတယ်၇ခုလောက်ဆီကို inspection ထွက်ကြပါတယ်။ ရောက်ခဲ့တဲ့ ဟိုတယ် တော်တော်များများကတော့ အုန်းရှာလပတ်ရည်ဆိုပြီး အုန်းသီးဇွန်းခြစ်နုနုလေးတွေထည့်ထားတဲ့ အုန်းရည် နဲ့ ဧည့်ခံတာကတော့ အ၀ပဲ။ ညနေ 6နာရီခွဲမှ အခန်းကို ပြန်ရောက်ပါတယ်။ ည7နာရီခွဲမှာတော့ cocktail party နဲ့ အတူ ပုသိမ်ထီးအက၊ ဟာဝိုင်ယီ ကျွန်းအကတွေနဲ့ ဖြေဖျော်ပါတယ်။ ဧည့်သည်တွေထဲမှာ နိုင်ငံခြားသား G.M တွေလဲ ပါတယ်လေ။ညစာ ကိုတော့ ကမ်းခြေမှာ စားပွဲခင်းပြီး seafood grilled နဲ့ ထမင်းကြော်တွေ ကျွေးတာပေါ့ (မြင်မှ မမြင်ရတာ ယုံလိုက်နော် အဟိ ) အခန်းကိုတော့ 10နာရီ 15လောက်မှ ပြန်ရောက်တယ်။ ခုထိ ရေလဲ မထိရသေးဘူး(ရေတော့ ချိုးပြီးသားပါနော် :P )21ရက်နေ့ မနက်မှာ 6နာရီထပြီး 6နာရီခွဲကနေ 7နာရီခွဲထိ ပင်လယ်ထဲဆင်းတယ် ပျော်စရာကြီး (ဒါပေသိ တစ်ယောက်တည်း အဟင့်  ) ပြီးတော့ ရေချိုး ရှိုးပြင်ပေါ့။8နာရီမှာ မနက်စာစား 8နာရီ 45လောက်ကျ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ချင်လို့ ကမ်းစပ်သွားပီး ဓါတ်ပုံ ဆရာချောင်းတာလဲ မတွေ့လို့ ခရုတွေပဲ ကောက်ပြီး ပြန်လာတယ်။ (၀င်ကစွပ် ပုံပြင်တပုဒ်ရှိတယ် ပြီးမှ ပြောပြမယ်လေ)ဟိုတယ်ရောက်တော့ ကံကောင်းပြီး living color က ကို.. နဲ့ တွေ့ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးလို့ ဒီပုံလေး တပုံ ရှားရှားပါးပါး အမှတ်တရ ရိုက်လာရတယ် ( ရုပ်ဆိုးလိုက်တာနော် မဲတုန်းနေတာပဲ အဟိ)9ခွဲတော့ ဟိုတယ်ကထွက်ပြီး presentation လုပ်မဲ့ ဟိုတယ်ဆီကိုသွား။ လာတဲ့ လူတွေတချို့ကို လိုက်နှုတ်ဆက်ပြီး အဲဒီမှာ presentation လုပ်ဖို့ projector နဲ့ laptop တွဲတာ အဆင်မပြေလို့ ကိုနေဘုန်းလတ်ဆီ ဖုန်းဆက်။ ကိုကြီးကျော်က လေဆိပ်မသွားခင် ကပျာကယာ ပြောပြ။ အဲဒီတော့မှ အဆင်ပြေပြေ ရသွားလို့ တော်ပါသေးရဲ့ ။ သိုင်းခရုပါ ဗျို။အစီအစဉ်တွေ ပြီးတော့ 12ထိုးပြီး ဟိုတယ်ပြန်လာ နေ့လည်စာစား ပစ္စည်းတွေ သိမ်း။ မှာထားတဲ့ ငွေဆောင် ဘိန်းမုံ့ (သရက်တော ထိုးမုံ့) တွေ သေချာထည့် ။ 2နာရီမှာ ဟိုတယ်က စထွက်ခွာပြီး ကားပေါ်မှာ လူကြီးတွေ နားမခံသာအောင် သီချင်းတွေဆိုပြီး ရန်ကုန်ကို ည8နာရီမှာ ပြန်ရောက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီတခေါက် ခရီးက ချစ်သူများကျွန်း(နဂိုနာမည်က ဘူးကွဲကျွန်းပါတဲ့ )လဲ မရောက်ပါဘူး။ မြင်းလဲ မစီးခဲ့ရဘူးပေါ့နော်။နောက်ရက်မှာတော့ “ဘာပါလဲဗျ” လို့ မေးကြပါတယ်။ငွေဆောင်ဘိန်းမုံ့ နဲ့ ပုသိမ်ဟာလ၀ါတွေ ပါပါတယ်။ မနားရပဲ ရုံးတက်ရတာဆိုတော့ ရုံးက လူတွေ ၀ိုင်းစားလို့ ကုန်သွားပါပြီ။အဲတော့ မုံ့ မကျွေးလိုက်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ကောက်လာတဲ့ ခရုတွေပဲ ပေးစရာကျန်တော့တယ်။ လာယူလှည့်နော်။ (အဲဒီ ခရုလေးတွေ ဓါတ်ပုံကိုလဲ တင်ဖို့ ကြိုးစားရဦးမယ်)
Was thatacamera in your hand?? Anyway, I envy you becasue It’s raining where I am and some leaves are turning yellow and some are orange and some are red. It’s really getting colder. Please keep it up, love your writing.
ဟုတ်တယ်နော်မ ကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ်တောင်ရဲရဲတင်းတင်း မပြောနိုင်တဲ့ အကျဉ်းအကျပ်ထဲက ဘ၀တွေ လွန်မြောက်ချင်ပြီ
to anonymous,No, It is not camera and its only mobile phone(without camera) in my hand. Where is your place? As for me, I wanna see some leaves are turning yellow and some are orange and some are red. I like cold weather. Thanks for your words. :)
Hey Chaos,I think you wrote comment in wrong post. right?No matter what, like the same to you, I wanna escape constraints ASAP.
I am not far from Him. Since he wrote it so nicely...http://yemon.blogspot.com/